सन्यास लिएका मेस्सीबारे ज्योतिषको नयाँ भविष्यवाणी, फ्यान खुसी! - Enepalese.com
सन्यास लिएका मेस्सीबारे ज्योतिषको नयाँ भविष्यवाणी, फ्यान खुसी!
इनेप्लिज २०७३ असार १६ गते ४:१४ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १४ असार । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका अर्जेन्टिनाका प्रख्यात फुटबलर लियोनल मेस्सीबारे ज्योतिषले नयाँ भविष्यवाणी गरेका छन् ।
सोमबार कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा मेस्सीले पेनाल्टी मिस गरेका थिए भने अर्जेन्टिना चिलीसँग ४–२ गोल अन्तरले पराजित भएको थियो । यो नतिजापछि मेस्सीले अर्जेन्टिनाको टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रिय टिमबाट अब नखेल्ने भन्दै सन्यासको घोषणा गरे ।
मेस्सीले सन्यास लिएपछि धेरै फ्यानहरुले दुःख व्यक्त गरे । फुटबलका महान हस्तीहरुले समेत मेस्सीले सन्यास लिने बेला नभएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिएर टोलीमा फर्किन दबाब दिइरहेका छन् ।
यसैबेला मेस्सीले सन्यास लिएको एकदिनपछि मंगलबार नेपालका चर्चित युवा ज्योतिष डा सुनील सिटौलाले सन्यास निर्णयबाट मेस्सी पछि हट्ने र पुनः खेलमा फर्कने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्- ‘मेस्सीले सन्यास फिर्ता लेलान कि नलेनान उनको भविश्य के होला भन्ने बारेमा ज्योतिष शास्त्रबाट विचार गर्दा सन्यास नलिने र पुनः खेलकुदमा फर्कने नै देखिन्छ ।’
ज्योतिष सिटौलाले मेस्सीले सन्यास घोषणा गरेको दिन पुनर्फु योग परेको भन्दै पुनर्फु फेरि गर्नुपर्ने भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ भने ।
ज्योतिषको यो भविष्यवाणीसँगै फ्यानहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन् ।